Guardiola oo ammaanay labo xiddig ka tirsan Man Utd kaddib kulankii xalay ee Manchester derby – Gool FM
Guardiola oo ammaanay labo xiddig ka tirsan Man Utd kaddib kulankii xalay ee Manchester derby
Dajiye January 30, 2020
(Manchester) 30 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ku ammaanay labo xiddig ka tirsan naadiga Manchester United bandhigii wacnaa ay xalay ka sameeyeen kulankii Manchester derby.
Pep Guardiola ayaa ammaan u soo jeediyay labada xiddig ka tirsan kooxda Manchester United ee Matić iyo Fred, kaddib kulankii xalay ee Manchester derby.
Pep Guardiola iyo wiilashiisa ayaa waxay xalay kala kulmeen Manchester United guuldarro 0-1 ah, kulankii lugta labaad wareega afar dhamaadka koobka Carabao Cup ay ku wada ciyaareen Etihad Stadium.
Inkastoo Sky blue ay guuldarro la kulantay haddana waxay u soo baxday finalka tartankan oo ay ku wada ciyaari doonaan kooxda Aston Villa, maadaama ay ku soo adkaatay 1-3 kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Old Trafford.
Haddaba Pep Guardiola ayaa kaddib marka ay ciyaarta soo idlaatay wuxuu u sheegay warbaahinta:
“Xiddigaha Matić iyo Fred waxay ahaayeen kuwo aad u fiican inta ciyaarta ay socotay, gaar ahaan Nemanja door muhiim ah ayuu ku lahaa kulankan”.
“Waxaan ciyaarnay ciyaar aad u wanaagsan, waxaan fiicneyn 180 daqiiqo kulankii lugta hore iyo lugta dambe”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay kooxdeyda iyo wixii ay ku soo bandhigeen kulankii Manchester derby, waan ka fiicanahay United”.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gaarno Wembley mar labaad iyo markii seddexaad oo isku xigta, tanina waa jawaabta ugu habboon ee aan siin karno kuwa dhahaya waxaan u baahanahay nasiino guusha kaddib”.
Kooxda Barcelona oo dalabkii ugu dambeysay ka gudbinaysa laacibka Chelsea ee Willian